न्यूरोडको ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोबाईल किन्नुस्,६०% सम्म छुटका साथै उपहारै उपहार लिनुस् ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बजार > न्यूरोडको ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोबाईल किन्नुस्,६०% सम्म छुटका साथै उपहारै उपहार लिनुस् !
न्यूरोडको ताम्राकार कम्प्लेक्समा मोबाईल किन्नुस्,६०% सम्म छुटका साथै उपहारै उपहार लिनुस् !
काठमाडौ। काठमाडौको न्यूरोडस्थित ताम्राकार मोबाइल कम्प्लेक्सले दशैं तिहारको बहार ताम्राकारमा मोबाइल किन्दा उपहार नै उपहार योजना ल्याएको छ । मोटोरोला र लेनोभोको मुख्य प्रायोजनमा भदौ २२ गतेदेखि सुरु हुने यो मोबाइल मेलामा सबै ब्राण्डका मोबाइलमा छुटको ब्यबस्था गरिएको छ।
ताम्राकार मोबाइल ब्यापार संघका अध्यक्ष जगत साउदका अनुसार मेलामा मोबाइलको मोडल हेरेर ५ देखि ६० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ। राजधानीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मेलामा सामसुङ एस फोर र एस फाइभमा ६० प्रतिशत, डिटिसी टचमा ६० प्रतिशत, हुवावे अनर होलीमा ४० प्रतिशत छुट दिइएको आयोजकले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी लेनेभोका मोबाइलको खरिदमा ३० देखि ५० प्रति प्रतिशतसम्म छुटको ब्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
ताम्राकार मोबाइल बजारमा न्यूनतम ९ सयदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल सेट उपलब्ध रहेका छन् । यसैगरी मेलामा मोबाइलफोनको खरिदमा मोटरसाइकल, टिभी, स्मार्ट फोन पनि उपहार पर्न सक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
दैनिक २ वटा मोबाइल, १० वटा ब्लुटुथ तथा पावर बैंक लक्की ड्र मार्फत वितरण गरिनुका साथै साप्ताहिक रुपमा एउटा सामसुङको ३२ इन्चको टिभी लक्की ड्र मार्फत बितरण गरिने पनि आयोजकले जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित मितिः२०७४ भदौ २०
२०७४ भदौ २० गते १६:४४ मा प्रकाशित
नौ कक्षामा पढ्दै नायिका करिश्मा मानन्धर
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका लागि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेन,म्याद थपको माग
भिसा स्टिकरको आम्दानी बेहिसाब, लेखा समितिले थाल्यो छानबिन